October 11, 2020 - Padaethar
October 11, 2020 by Padaethar
နေ့နံမတည့်တဲ့စုံတွဲလေးတွေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့ ဒီနည်းလေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
နေ့နံမတည့်တဲ့စုံတွဲလေးတွေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့ ဒီနည်းလေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ဓမ္မာ၊ ​သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ စီးပွါးမတက်တာ၊ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်း အယူရှိပါတယ် သမီးရည်းစား ချစ်သူဘဝမှာ ဘာနေ့သား၊ ဘာနေ့သမီး ဆိုတာတွေက သိပ်အရေးမကြီးပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ကတော့ နေ့နံတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ မြန်မာ အယူအဆမှာတော့ ဓမ္မာ၊ ​သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ ဆိုပြီးလက်တွဲဖို့ မသင့်တော်တဲ့ မောင်နှံလေးတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဓမ္မာ၊ ​သောက၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ အတွဲလေးတွေ လက်ထပ်မိရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ စီးပွါးမတက်တာ၊ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့လည်း အယူရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွမ်းထက်တဲ့ ယတြာတွေနဲ့ ကာကွယ်လို့ ရတာမို့ Marry ရဲ့ … Read more
ပါးစပ်ကထုတ်မပြောပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့အချက်( ၆ )ချက်…
ပါးစပ်ကထုတ်မပြောပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့အချက်များ (၁)ကိုယ့်ကို ငေးကြည့်ခံရတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ကိုယ့်ကိုငေးမောကြည့်ခံရတာကို မကြိုက်သူ တော်တော်ရှားပါတယ်။ဥပမာ သင်ဟာချစ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လှလှလေးဝတ်ပြီး မိတ်ကပ်လှလှလေးပြင်လာတယ်ဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လျှောက်လာတဲ့သင့်ကို ပုရိသတွေလည်ပြန်ကြည့်တာကိုသာယာနေတတ်ကြ ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိူးမှာဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆုံးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဘေးဘီဝဲယာကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့ဘဲ သူများတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုမှာ ကြိတ်ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်လေ။ (၂)အခြားအမျိူးသမီးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဲဘဲကို တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်က ငေးကြည့်နေတာကို မိန်းကလေးတွေမကြိုက်ကြပါဘူး။ထိုသို့သောအခါမျိူးမှာ မနာလိုစိတ်နှင့်ချစ်သူကို ကိုယ်သာပိုင်သလိုလုပ်ပြလိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်လေးချောချော အမိုက်စားလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘဲကို လာ crush တဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ကိုမနာလိုဖြစ်တဲ့အခါ ဂုဏ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ (၃)ကောင်လေးတွေလာအီတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများက အီတာလောက်က အရေးမကြီးဘူး။အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ကော်ဖီဆိုင်က ကော်ဖီဖျော်တဲ့သူချောချောလေးနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိတာ…. ကျောင်းသွားဖော်သူငယ်ချင်းက လှတယ်လို့ချီးကျူးတာ၊အွန်လိုင်းပေါ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာ ကို မသိစိတ်က သာယာတတ်ကြပါတယ်။ (၄)ယောက်ျားတွေကိုယ့်ကြောင့်ရန်ဖြစ်တာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပေါ့။ကိုယ့်အတွက်နဲ့ … Read more
အမျိုးသမီး တွေကိုဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးအရာ ( ၃ ) ခု
အပျိုစစ်စစ် မိန်းခလေးများသာဖတ်ရန်…ခေါင်းစဉ်ကြည့် ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့နော်…အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ပါ…
အပျိုစစ်စစ် မိန်းခလေးများသာဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုးမထင်နဲ့ အုံး အအိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဖတ်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်မှာစိုးလို့ နော်….အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေတကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီအပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့ တောင် တင်စားထားကြပါတယ်။အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့ က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့ က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ။ စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲကြီးသာ … Read more
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်…
“ငါ့သမီးကို အမေမှာချင်တယ်” ငါ့သမီးလေးရယ် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာတော့ ခေတ်သဘာဝမို့ အမေမပြောလိုပါဘူး… သမီးရယ် ဒါပေမယ့် မေမေမှာချင်တာက… ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထားပြီး… ဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် တွဲတင်နဲ့ မေမေသူများတွေပြောလို့ အကုန်သိပြီးပြီ သမီး … သမီးရယ် … သမီးရည်းစားက တကယ်လို့သမီးနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မရခဲ့ဘူး မယူဘူးဆိုရင် … ငါ့သမီးဘဝလေးကို ဘယ်ယောက်ျားလေးက တန်ဖိုးထားမှာလဲ…??? ပြီးတော့မေမေတို့ မျိုးရိုး ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလည်း ငဲ့ကြည့်ပါဦးသမီးရေ … ခုတော့ … သမီးက ငါ့ရည်းစားလေး ဘယ်လောက်လှတယ် ဘယ်၍လှတယ်နဲ့ ကြွာချင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွဲတင်တော့ မေမေတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင် က ပြောလာပြီ သမီးရေ မဆုံးမဘူးလား မအုပ်ချုပ်ဘူးလားတဲ့…??? နောက်တစ်ခါ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရည်းစားနဲ့ ဓာတ်ပုံ … Read more
လိုက်လျောတတ်လွန်းတဲ့ ယောက်ျားတွေက ပိုမိုဖောက်ပြန်လေ့ရှိ
မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက အချော့ကြိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကို အလိုလိုက်တာမျိုးကို သဘောကျကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးသလို သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင် ကြွေမှာပဲမဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ယုံချင်စရာမကောင်းဆုံး ယောက်ျားတွေပါ။ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီဆို ဒီအချက်တွေကိုသာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ ငြင်းခုံမှုမရှိတာ ကိုယ်နဲ့သူ့ကြားမှာ အငြင်းပွားစရာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ ဥပမာ ဘောပွဲလောင်းမိတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီအခါ ” ငါက ယောက်ျားလေးပဲ ဒါမျိုးတော့ အနည်းအကျဉ်း လုပ်မိမှာပဲ” ဆိုပြီး ပြောလာရင် စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့။ သူက အမှန်ပြောနေတာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပြောတာကို စသလိုနောက်သလိုနဲ့ စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်တာမျိုးက နောက်ကွယ်မှာ ထင်တိုင်းကြဲမယ့်သဘောပါပဲ။ ၂။ ကိုယ်အလုပ်များနေရင် စိတ်ကောက်တယ် ချစ်သူကောင်း ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကောင်မလေး အလုပ်များနေရင် နားလည်ပေးတတ်တာချည်းပါပဲ။ အလုပ်တွေကို … Read more
သင့်ကို တနေ့သေချာပေါက် လမ်းခွဲပြီးထားခဲ့မဲ့ ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့လက္ခဏာ(၇)မျိုး အချစ်ရေးကိစ္စရပ်ဟာ ထမင်းစားရေသောက်တဲ့ ကိစ္စလောက် လွယ်ကူလှသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ တစ်ဘဝလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တတ်ပြီး….တစ်ဘဝလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ခံယူထားသူတွေရှိသလို… ကြောရရုံ၊ အတွေ့အကြုံတစ်ခုသက်သက်သာ သဘောထားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေအဖို့် အရွေးမမှားဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ နစ်နာစရာရှိရင် ပိုပြီး နစ်နာတက်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ တကယ်လို့သာ သင့်ချစ်သူ အမျိုးသားဟာ အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ ပြနေရင် …. သူသင့်ကိုတစ်နေ့နေ့မှာ ထားခဲ့မှာ အသေအချာပါဘဲ။ Shwemom ပရိသတ်ကြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး။ (၁) သင့်မိသားစုကို မတွေ့လို၍ ရှောင်ဖယ်နေရင် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ကယ် ချစ်ခင်လက်ထပ်လိုတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင် မိမိဘက်က တောင်းဆိုစရာမလိုပဲ၊ ဘယ်နေ့ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ရမလဲဆိုတာ တွင်တွင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကို ကြောရရုံကြံချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ … Read more
ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ဆီက မမျှော်လင့်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်…
ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ဆီက မမျှော်လင့်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်… မိန်းကေလးတွေ က အချစ် ကြီးကြပါတယ် …။ လော ဘ လည်း ကြီးကြတယ် …။ ဒီနေရာမှာ လောဘဆို တာ ငွေကြေး ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ကို တပ် မက်ခြင်းရယ် လို့ မဆို လို ပါဘူး …။ ကိုယ့် အပေါ် အ ရာ အား လုံး ပုံ အပ် စေ ချင် တဲ့ လော ဘ မျိုး ပါ …။ ဒါ ပေ မယ့် ကိုယ်မျှော် လင့်တိုင်း မရဘူးဆို တာလေးတော့ သတိချပ်စေ လို … Read more